कुरा आदिम समयको हो । साधु तुकाराम आफ्नो आश्रममा बसिरहेका थिए । उनका एकजना रिसाहा चेला साधुको नजिक आए र भने, ‘गुरुजी, तपाई कसरी आफ्नो व्यवहार यति हार्दिकतापूर्ण बनाउन सक्नुहुन्छ ?
न तपाईं कोहीसँग रिसाउनु हुन्छ न अरुको बारेमा कुरा काटेर समय बिताउनुहुन्छ ? कृपया तपाईंको यस्तो असल व्यवहारको रहस्य बताउनुहोस् ।’
‘मेरो रहस्य ! त्यो के हो गुरुजी ?’ शिष्यले आश्चर्य मान्दै सोधे । ‘तिमी आउँदो एकहप्ता भित्र मर्दैछौ,’ साधु तुकाराम दुःखी हुँदै बोले ।
अरु कसैले भनेको भए त शिष्यले यो चेतावनीलाई हाँसीमजाकमा उडाउन सक्थ्यो होला तर स्वयं साधु तुकारामको मुखबाट यस्तो कुरा निस्किएपछि कसरी नपत्याउनु ? शिष्य उदास भयो र गुरुको आशिर्वाद लिएर घर फर्कियो ।
त्यो दिनदेखि शिष्यको स्वभावमा ठूलो परिवर्तन आयो । ऊ सबैसँग प्रेमपूर्वक बोल्न थाल्यो र कसैसँग रिसाएन । आफ्नो धेरै समय पूजा र ध्यानमा लगाउन थाल्यो । आफूले यसअघि दुर्व्यवहार गरेका मानिसलाई भेट्दै माफी माग्न थाल्यो । हेर्दाहेर्दै साधुले घोषणा गरेको एक हप्ता पूरा हुने समय नजिक आयो ।
शिष्यले भने, ‘गरिनँ । विल्कुल गरिनँ । मसँग बाँच्नको लागि केवल सात दिन बाँकी थियो । म यस्ता बेकारका कुरामा समय कसरी खर्च गर्न सक्थेँ र ? म त सबैलाई प्रेमपूर्वक भेटेँ र ज-जसको दिल दुखाएको थिएँ, उनीहरुसँग क्षमा मागेँ ।’
(यो प्रसंगलाई सामाजिक सञ्जालबाट लिइएको हो, यसको बारेमा टिप्पणी र प्रतिवाद आवश्यक छैन, यो मात्र सकरात्मक सन्देशको लागि प्रकाशित गरिएको हो)